Maamulka Degmada Heliwaa oo sheegay in suuqyada degmadaasi laga bilaabo doono qaadista cashuuraha – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa oo ay wehliyaan mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Benaadir iyo saraakiil ka tirsan ciidanka ilaada deegaanka Xamar ayaa maanta howlo kormeer ah ku soo kala bixiyay suuqyada Waxar Cadde, Suuqa Heliwaa iyo Darmooleey, halkaasi oo dhawaan la geeyay ciidamada amniga.
Ujeedka kormeerka ayaa ah sidii mas’uuliyiintaan ay ugu kuurgeli lahaayeen howlaha ganacsi ee ka jira suuqyadaasi, isla markaana ganacsatada loo gaarsiin lahaa fariin ah in suuqyadaasi ay goor dhaw ka bilaaban doonaan cashuuraha dowladda Hoose ee Xamar.
Suuqyada Waxar Cadde, Heliwaa iyo darmooleey oo ka wada tirsan degmada Heliwaa ayaa waxaa xilligan ka socda horumaro xagga ganacsiga ah, iyadoo hay’adaha ammaanka ay ku guuleysteen inay xaqiijiyaan Nabadgelyada suuqyadaasi.
Guddoomiyaha Degmada Heliwaa Maxamed Axmed Xaashi oo kormeerka kaddib la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in kan maamul ahaan ay xoogga saarayaan sidii dib loo soo celin lahaa adeegyada aas aasiga u ah bulshada ku nool degmada Heliwaa, isla markaana ganacsatada suuqyada degmadaasi loo fahamsiin lahaa ahmiyadda ay leedahay bixinta cashuuraha.
Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay bulshada demada ku nool inay ka qeyb qaataan dib u dhiska waddad Ex-koontarool Balcad oo ka muuqda bur bur xoogan oo saameeyay gaadiidka iyo dadweynaha ee halkaasi isticmaala.